Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Dalka Turkiga Erdogan oo Eedeeyay Sarkaal Maraykan Ah.
Madaxwaynaha Dalka Turkiga Erdogan oo Eedeeyay Sarkaal Maraykan Ah.
Madaxwaynaha Dalka Turkiga Erdogan ayaa sarkaal sare oo kamid ah Militariga dalka Mareykanka ku eedeeyay inuu lajiro dadkii isku deyay inay dowladda afgembiyaan, laba isbuuc ka hor, kaasoo fashilmay. Hadallada Madaxweyne Erdogan, waxa ay ku wajahan yihiin Janaraal Joseph Votel oo ah sarkaalka ugu sareeya ciidamada Mareykanka ee Gobolka Bariga Dhexe.
Sarkaalkaas ayaa sheegay in shaqa ka eryidda ciidamada Turkiga kadib afgembigii dhicisoobay uu wax u dhimayo wada shaqeynta militariga ee ka dhaxaysay Maraykanka iyo Turkiga. Hadal uu ka jeediyay magaalada Anqara, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in dalalka cambaareynaya howlgalka maamulkiisa, looga baahan yahay inay mahdiyaan Turkiga sida uu uga hortagay fagembigii dhicisoobay.
Ra’iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim oo la hadlay taageerayaasha dowladda waxa uu sheegay inuu amray in la xidho saldhigyada ay kamid ahaayeen ciidamada ka qeybgalay afgembigaas dhicisoobay. Dhanka kale 21 weriyayaal ayaa waxaa la horkeeyay maxkamad ku taalla Istanbul, taas oo qeyb ka ah howlgalka ka dhashay afgembigii laba isbuuc ka hor dhicisoobay ee ladoonayay in xilka lagaga tuuro dawlada uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.